Mitovy amin'ny masoivoho nomerika amin'ny asa aman-draharaha hatramin'ny 1996, dia nanana fotoana namoronana tranokala orinasa sy orinasa tsy mitady tombony an-jatony izahay. Nianatra be dia be izahay teny an-dàlana ary nidina tamin'ny masinina voahosotra tsara ny fizotrantsika.
Ny fizotranay dia manomboka amin'ny a tranonkala rafitra, izay ahafahantsika manao asa fiomanana am-boalohany ary hametaka ny antsipiriany amin'ny mpanjifa alohan'ny hahatongavantsika lavitra loatra amin'ny làlan'ny fitanisana sy famoronana.
Na eo aza ny zava-misy fa tena mandeha tokoa ity fizotrany ity dia mbola mihaona amin'ilay RFP atahorana ihany isika indraindray. Misy tia RFP ve? Tsy noheveriko izany. Na izany aza dia mbola manohy ny fanao ho an'ireo fikambanana mitady toerana hanombohana izy ireo rehefa mila tetik'asa tranokala novonoina.
Ity misy tsiambaratelo iray: tsy mandeha ny RFP tranokala. Tsy tsara amin'ny mpanjifa izy ireo ary tsy tsara amin'ny maso ivoho.
Ity misy tantara iray maneho ny zavatra lazaiko. Nisy fikambanana vao tonga tato aminay mitady fanampiana amin'ny tranonkalany. Nampiarahin'izy ireo ny RFP fa tsy ny famaritana andian-dahatsoratra mahazatra, ny fangatahana tsy manam-paharoa ary ny lisitry ny lisitra faniriana mahazatra (ao anatin'izany ny fenitra taloha tsara: "Tianay ho mora mivezivezy ny tranonkalantsika vaovao").
Hatreto aloha dia mbola mety tsara. Na izany aza, nanazava izahay fa ny fizotrantsika dia manomboka amin'ny drafitra an-tranonkala iray, izay natao hanomezana anay kely fotoana hijerena, hanaovana drafitra ary hanaovana sarintany an-tranonkala alohan'ny hanaovantsika vidiny. Nanaiky ny hametraka vonjimaika ny RFP amin'ny sisiny izy ireo ary hanomboka amin'ny drafitra ary novonoinay ny zavatra.
Nandritra ny fihaonantsika voalohany momba ny drafitra dia nandinika tanjona manokana izahay, nametraka fanontaniana ary nifanakalo hevitra momba ny sehatry ny varotra. Nandritra ny dinidinika nataonay dia nanjary nazava fa ny entana sasany ao amin'ny RFP dia tsy nilaina intsony raha vantany vao novalianay ny sasany tamin'ny fanontaniany ary natolotray ny toro-hevitray mifototra amin'ny traikefa an-taonany maro.
Nahita fiheverana vaovao tsy tafiditra tao amin'ny RFP koa izahay. Faly be ny mpanjifanay fa afaka nanao “manatsara” ny zavatra takian'izy ireo izahay ary mahazo antoka fa teo amin'ny pejy iray ihany izahay rehetra momba ny drafitra.
Ho fanampin'izay, izahay dia nitahiry ny volan'ny mpanjifa nony farany. Raha nanonona vidiny mifototra amin'ny RFP isika, dia nifototra tamin'ny fepetra izay tsy mety amin'ny fikambanana izany. Fa kosa, nifampiresaka tamin'izy ireo izahay mba hanome safidy hafa izay mety kokoa sy lafo kokoa.
Hitanay hatrany io scenario io, ka izay no mahatonga anay hanolo-tena tanteraka amin'ny fizotran'ny drafitra ary maninona izahay no tsy mino ny RFP an-tranonkala.
Ity ny olana lehibe amin'ny RFP - nosoratan'ny fikambanana mangataka fanampiana izy ireo, nefa manandrana mamina mialoha ny vahaolana mety. Ahoana no ahalalanao fa mila mpamosavy fametahana vokatra ianao? Azonao antoka ve fa hampiditra faritra tsy an'ny mpikambana irery ianao? Fa maninona no nofidinao io endri-javatra io noho io endri-javatra io? Mitovy amin'ny fandehanana any amin'ny dokotera izany mba hahitana Diagnostika sy fitsaboana, fa mangataka fanafody manokana alohan'ny hitsidihanao ny biraony akory.
Ka raha mikasa tetik'asa tranokala vaovao ianao dia manandrama manaparitaka ny fahazarana RFP. Atombohy amin'ny resaka sy drafitra amin'ny ny masoivohonao (na masoivohona mety) ary mizaha fomba mailaka kokoa amin'ny tetikasan'ny tranonkalanao. Ny ankamaroan'ny fotoana dia ho hitanao fa hahazo valiny tsara kokoa ianao ary mety hitahiry vola aza!
May 14, 2013 ao amin'ny 5: 25 PM
Tsy manaiky aho. Ny RFP dia tsy hevitra mahatsiravina ho an'ny tranonkala fotsiny, fa hevitra mahatsiravina ho an'ny tetikasa rehetra.
Ny antony dia ireo voalazanao etsy ambony ireo. Fa izao no tena antony lehibe mahatonga ny RFP tsy mandeha: mihevitra izy ireo fa ny client dia efa nanao ny fanavaozana rehetra.
Raha afaka manavao tsy misy fanampiana ianao, dia inona no lazainy momba ny fomba fijerinao ilay fanampiana heverinao fa ilainao?
May 15, 2013 ao amin'ny 1: 48 PM
Misaotra ny tamberina, Robby! Eny, manaiky aho… Te-hifikitra amin'izay fantatro fotsiny aho
May 14, 2013 ao amin'ny 6: 29 PM
Hanolotra tolo-kevitra miorina amin'ny RFP ho an'ny tranokala iray aho, saingy mitaky fampiasam-bola lehibe lavitra noho ny mpanjifa satria aleonay manana fifandraisana mitohy toy ny asa tetikasa.
May 15, 2013 amin'ny 7: 51 AM
Ditto izay nolazain'i Robby.
May 16, 2013 amin'ny 11: 47 AM
Tsara izany. Marina izany ho an'ny tranonkala… ary ny vokatra sy serivisy hafa rehetra izay tsy entam-barotra tanteraka. Ny RFP dia manandrana manisa isa (mba hahafahanay mampitaha azy ireo amin'ny takelaka) izay manohitra ny famaritana isa. Raha tsy mangataka teny nindramina ianao, dia lazao fa fiara mpitondra fiarandalamby vy (ary angamba tsy izany akory!), Dia mila mamantatra mpamatsy atokisanao ianao ary mamela azy ireo ho mpanolo-tsaina amin'izany. Raha tsy izany, ny vokatra dia "hita fa tsara amin'ny taratasy," fa tsy mandeha amin'ny laoniny amin'ny tontolo tena izy.
May 16, 2013 ao amin'ny 12: 43 PM
Tiako! Misaotra, Chris.
May 16, 2013 ao amin'ny 12: 23 PM
Ny fehin-kevitra: ny ankamaroan'ny mpanjifa dia tsy mahalala izay tadiaviny, fa ny lehibe indrindra dia tsy fantany izay ilainy …… fitoriana filazantsara mandrakizay avy amin'ny masoivoho… ..